संकटमा एमाले—माओवादी एकता !
नेपालमा हालै सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमार्फत् पहिलो दलको रुपमा स्थापित नेकपा एमाले र तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता पद बाँडफाडका कारण संकटमा परेको छ । प्रमुख दुई बामपन्थी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेका बेला पदीय भागबण्डा तगारो बनेको एमाले नेताहरुले बताएका छन् । तर, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भने सरकार गठन हुनु अगाडि नै पार्टी एकता हुने दावी गर्छन । माओवादी केन्द्रका अरु नेताहरुले भने एमालेकै कारण पार्टी एकता संकटमा पर्न थालेको बताउन थालेका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैंकक भ्रमणबाट फर्किएपछि पार्टी एकताका लागि ओली र प्रचण्डबीच पटकपटक छलफल भएको छ । तर, पार्टी एकताको प्रारुप भने राम्रोसँग आइसकेको छैन । दुई नेताहरुले सधैं झै छलफल सकारात्मक भन्ने गरेका छन् । निर्णय र निष्कर्ष भने सार्वजनिक हुन सकेको छैन । पछिल्ला केही दिनदेखि त पटकपटक ओली र प्रचण्डबीच वान टु वान वार्ता भएको छ । एक दुई घण्टा मात्र नभएर दुई अध्यक्षबीच झण्डै छ, सात घण्टासम्म छलफल हुने गरेको छ । सचिवालयका सदस्यलाई समेत नलगेर ओली र प्रचण्डले पार्टी एकताका विषयमा छलफल गरे पनि मुख्य विषयमा कुरा नमिलेको स्रोतको दावी छ ।
बैंकक भ्रमणपछि ओलीको अस्वाभाविक व्यवहार !
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैंककबाट फर्किएपछि पार्टी एकताका विषयमा पहिले जस्तो नरम देखिएका छैनन् । उनको ध्यान सरकार गठनमा केन्द्रीत भएको छ । त्यसो त बैंककमा उनले केही विदेशीलाई भेटेको विभिन्न सञ्चार माध्यमले दावी गरेका थिए । बैंककमा रहँदा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत एवम् ‘रअ’ का कर्मचारी अनिल धस्वाना र ‘रअ’ का पूर्व प्रमुख अजित दोभाससँग भेट गरेको स्रोतको दावी छ । भेटवार्तामा नेपाल चीन सम्बन्धका विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका जिज्ञासा र नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारका विषयमा छलफल भएको विभिन्न सञ्चार माध्यमले दावी गरेका छन । बैंककको भेटवार्ता लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा बधाई दिदैं भारत भ्रमणको निम्ता गरेका थिए । नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिबसिंह पुरीले समेत नेपालमा नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतासँग पटकपटक भेटवार्ता गरिरहेका छन् । उनी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावपछि पटकपटक भारत भ्रमण समेत गरेका छन् ।
दुई पार्टी एकतामा ओलीको व्यवहार फेरिनुलाई माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुले बैंकक भेटवार्ता भनेर टिप्पणी गरेका छन् । तर, भारतले नेपालमा नाकाबन्दीपछि बिग्रिएको सम्बन्ध सुधारको पहल थालेको विदेश मामिलाका जानकारहरुले बताएका छन् । गोप्य भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिए पनि सबै कुरामा गलत नियत देख्नु राम्रो नहुने एक परराष्ट्र मामिला जानकारले बताए । पछिल्लो समय भारतले नेपालमा चीनले आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै गएको बुझिरहेको छ । भारतले नेपाललाई चीनको पक्षमा जान नदिने प्रयास स्वरुप ओलीसँगको भेटवार्ता तथा मोदीले टेलिफोन गरेको परराष्ट्रविद्को दावी छ । नेपालमा बाम गठबन्धन बनेर चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएपछि भारत झस्किएको छ । चाहना विपरीतको नेपालमा जनमत आएपछि उसले बामगठबन्धनसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसैको सुरुवातका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भारतीय प्रधानमन्त्रीले पटकपटक टेलिफोनमा वार्ता गरिरहेका छन् ।
बाम एकताका लागि केमा कुरा मिलेन ?
एमाले र माओवादी पार्टीबीचको एकता प्रक्रियाका लागि बनाइएको कार्यदलमा प्रदेश सरकार निर्माणका विषयमा सहमति जुटिसकेको छ । आउँदो सरकारमा जाने मन्त्रीहरुको विषयमा पनि सहमति भइसकेको छ । प्रदेशमा नेकपा एमालेले चार मुख्यमन्त्री पाउने र माओवादी केन्द्रले दुई मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको कार्यदलका संयोजक एमाले नेता सुवास नेम्वाङ्गले बताएका छन् । केन्द्र र प्रदेशको मन्त्रीमण्डल निर्माणमा पनि धेरै कठिनाइ नआउला ।
कुरा नमिल्नुको मुख्य कारणमा पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री ओलीले छाड्न मानेका छैनन् । राष्ट्रपति पनि एमालेको दावी रहेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पछिल्ला वान टु वान छलफलमा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि कार्यवाहक अध्यक्ष बन्न वा सहअध्यक्ष बन्न आग्रह गरिरहेको एमाले स्रोतको दावी रहेको छ । माओवादी केन्द्र पार्टी र यसका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो कुरालाई मान्य नहुने बताउने गरेको बताइन्छ । अबका एक हप्तासम्म पनि दुई अध्यक्षबीच सकारात्मक छलफल नभएको अवव्स्थामा गठबन्धन निर्माण गरेर नयाँ सरकार गठनमा लाग्ने चेतावनी समेत माओवादी नेताहरुले दिन थालेका छन् ।
ओली र प्रचण्डबीच हरेकदिन जसो छलफल भइरहेको छ । भेटवार्ताका क्रममा ओलीले आफूलाई एमालेका दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरुले दबाब दिएकाले थेग्न नसकेको बताउने गरेका छन् । ओलीले सहअध्यक्ष वा कार्यवहक अध्यक्ष बनेर बस्न आग्रह गरेमा पार्टी एकता नै संकटमा पर्ने माओवादी नेता नारायण दाहालले बताए । केही समयअघि पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति हुने अभिव्यक्ति दिएका एमाले नेता शेरधन राईले भने अबको एक हप्तामा पार्टी एकता निकर्षमा पुग्ने बताउन थालेका छन् ।
सरकार गठनमा कसरी कुरा भइरहेको छ ?
पार्टी अध्यक्ष बाहेक धेरै विषयमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति जुटेको छ । सरकारको नेतृत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, मन्त्री र जनवर्गीय संगठनको संरचनात्मक संरचनामा झण्डै सहमति जुटेको एक शीर्ष नेताले बताएका छन् । सरकारको नेतृत्व ओलीले गर्ने र प्रचण्डले पार्टीको नेतृत्व गर्ने यसअघिको भद्र सहमतिका विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीका अभिव्यक्तिले शंका पैदा भएको माओवादी नेताहरुले बताउने गरेका छन् । अब बन्न पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रहने छन् । प्रधानमन्त्री बदल्नुपर्ने अवस्थामा आलोपालो हुने गरी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बाँडफाड हुने सहमति हुने स्रोतको दावी छ । दुई पार्टीबाट एकएक जना रहने गरी दुई जना महासचिव रहने छन् । आवश्यकता अनुसार पाँच जनासम्म उपाध्यक्ष र वरिष्ठ नेताको परिकल्पना पनि नयाँ पार्टीमा हुने भएको छ । पछिल्लो समय सर्वोच्च नेताको रुपमा परिकल्पना पनि भइहेको छ ।
प्रदेशतर्फको प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र मन्त्री परिषद्को विषय टुंगोमा पुगिसकेको छ । नेताहरुको छलफल अब केन्द्रको सरकार गठन हुँदा मन्त्रालयको भागबण्डा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख तथा उपसभामुख को हुने भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुन थालेको छ । ओलीले राष्ट्रपतिमा अहिलेकै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् । तर नेकपा एमालेबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल राष्ट्रपतिका लागि बलिया दावेदार हुन ।
पूर्वसभामुख समेत रहेका एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग पनि अर्का आकाँक्षी हुन । राष्ट्रपतिका लागि माओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा बादलको चर्चा चलिरहेको छ । उपराष्ट्रपतिमा र सभामुखमा दुवै पार्टीबाट केही नेताको चर्चा शुरु भएको छ । उपराष्ट्रपतिमा अहिलेकै राष्ट्रपति भएको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेकै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङलाई दोहो¥याउने छ । तर नेताहरुको व्यवस्थापनको चुनौतीले गर्दा दुवै पार्टीमा दुवै पदमा दोहो¥याउन नहुने मत बलियो हुँदै गएको छ । यो पदमा अमिक शेरचनलाई लैजानु पर्ने तर्क उठिरहेको छ । पार्टी एकतामा भने गाँठो परेको छ ।